Was na-agbagharị blog vir nwa en wee wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị okwu, ọkachasị ndị nkwado gị kachasị akwado.
Ọ bụ ezie na ọdịnaya ọhụrụ gị nwere ike ịbụ maka oge ụfọdụ na ọbụna ndị nleta oge niile, ndị na-agụ akwụkwọ na-eguzosi ike n’ihe na-achọ mgbe niile maka iọiịọ na ha tụkwasịrị gị obi dị ka ikike na nchịkọta gị na ha na-echekwa banyere gị n’onwe gị.
Ị Ek is ike ị ara ara site site site ‘n webwerf wat na ‘n blog blog vir amaliete is
Ha na-enye aka na blog gị n’ọtụtụ ụzọ, webwerf na ntụnye echiche maka akwụkwọ ndị ọbịa
Ek het my nkwado obi na / ma ọ bụ ego iji jide gị na blog gị mgbe ị chọrọ ya
Daar is akwukwo nke ndi ‘ndi n’eso uzo’ nke inwere ike inye aka tolite niche gi
Waarom is dit nie ahịa ma ọ bụ ndị mmekọ ogologo oge ịchọrọ iji ọdịnaya pụrụ iche
Ihe kpatara nwere ike ịbụ otu puku na karịa, mana ihe doro anya bụ na ndị na – agụ akwụkwọ a adịghị ka ndị na – agụ akwụkwọ oge niile, na –adịghị ka ndị na – edebanye aha oge ka nileị haị gị, ma ọ bụ ezinụlọ gị.
2 Kedu ihe blote ịmepụta Akwụkwọ Akụkọ Ndị Akaụntụ?
2.5 5. E-pos na-enye mmekọrịta enyi
2.9 Ihe blote ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
N’okwu ndị dị mfe, akwụkwọ ozi ọma ma ọ bụ nke kachasị elu bụ akwụkwọ ozi pụrụ iche – ma ọ bụ ndepụta nke akwụkwọ akụkọ gị – edepụtara kpọmkwem maka ịpaw akkekekkkkkkk ndị na-akwado onyinye gị pụrụ iche, gị na / ma ọ bụ uto nke oru gi.
Maka odidi ya, akwukwo akuko edeputara bu nke nzuzo na ndi mmadu kpoo oku, nke mere na ekwughi n’ihu oha – nke a na – egbochi ndi mmadu emeghi onyinye puru iche site na ntinye aha ya. Ekwere ike ịnwe ike iche na nke a, mana iwu izugbe nke isi okwu bụ na akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ bụkwa nke zoro ezo, nke ndị otu ya maara, dị ka klọb nzuzo.
Die Mgbasaozi Mgbasaozi akwukwo ozi na Digital Quarters bụ òkù-naanị maka ihe ndị a:
A ọkọlọtọ ala bụ akwụkwọ akụkọ gị mgbe niile, ọdịnaya agbakwunyere dịịrị ndị debanyere aha nke blog ma ọ bụ weebụsaịtị na niche ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Mgbe ibido akwụkwọ akụkọ (ọkọlọtọ), ị na-eche ya na ntanetị nke ndị na-ege gị ntị nke na-akwụsi ike n’ihe ma nwee mmasị n’ihe ị ga-enye karịa ndị na-agụw eleta otu oge ma ọ bụ na-eleta mgbe niile ma ị chọghị inweta. ‘agbakwunyere’.
Dịka ọmụmaatụ, kwuo na ị na-agba ọsọ na blog na ịzụ ụmụ. Na mgbakwunye na ọdịnaya ị na-enwe kwa ụbọchị, ị ga-achọ ka ị na-emeso ndị na-agụ akwụkwọ kachasị eguzosi ike n’ihe na akwụkwọ akụkọ ebe ị na-ekere òkè ndụụd Nke a ga-abụ akwụkwọ akụkọ gị.
Ugbu a, kwuo na mmadụ iri na abụọ n’ime ndị a debanyere aha gị nyere gị aka inweta ihe ndị na – adịghị mkpa, nyochaa ọtụtụ ndị nne na nna ma jikọọ gị na nnukwu ụdị – ị nwereọ ikeasaasaicheiche (nkewapụrụ site na oge gị) maka obere ì gwè a ndị mmadụ na ndị enyi, ka ha nweta ohere dị iche iche nke nnụnụ ma ọ bụ nke mbụ, zaa ajụjụ ndị ọzọ na-esiri ike ma hazie nzuk.
Kedu ihe blote ịmepụta Akwụkwọ Akụkọ Ndị Akaụntụ?
Might nwere ike inwe obi abụọ banyere ihe kpatara ị ga – eji nye akwụkwọ akụkọ dị oke mkpa ụfọdụ echiche siri ike – ma ọ nwere ike ọ gaghị adabara ikpe gị, mana ị gaghị amata ruo mgbeọọ nyochara.
Ị nwere ike ịchọta ndị ọkasị gị pụrụ iche ị na-arụrịrịrịrịrịrịrị mmekọrịta na ụfọdụ ọdịnaya pụrụ iche ị maara na ha ga-achọ ma nwee ekele karịa ọtụtụd.
Sam Williamson nke Nsogbu Ndị Nchịkọta Ubi na-akọrọ ya ihe blote ọ ga-eji malite akwụkwọ ozi ọma na ihe ọ pụtara ịkọ ezigbo mmekọrịta ya na ụfọdụ ndị na – agụ akwụkwọ:
‘N Bụ m onye na – ede blọgụ, amalitekwara miwu ndepụta e-pos na gara aga, mana enwere m ụdị kọntaktị na saịtị m kemgbe m bidoro. Enweela m ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ m kpọtụrụ m kemgbe ọtụtụ afọ na azụlitela mmekọrịta mụ na ọtụtụ n’ime ha, ọbụlagodi na-agwa ha okwu banyere nrụrụ aka ha na Skype. Yabụ mgbe oge ruru iji wuo ndepụta e-pos, ọ dị njọ ịgụnye ndị na-agụ akwụkwọ ndị mụ na ha na-agwa okwu kemgbe ọtụtụ afọ. Ekpebiri m ịdepụta ndepụta e-pos deur iche maka ndị na-ag mak akwụkwọ m na-eguzosi ike n’ihe, nke gụnyere ozi ịntanetị ụbọchị ọmụmụ na ozi ịntanetị nkwado ole na ole. M ga-ezigakwa ozi ịntanetị na-arịọ ha maka nzaghachi eziokwu ma ọ bụrụ na m nwere echiche ọhụụ maka blọọgụ. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọzọ na-agụ akwụkwọ m na-enweta ozi-e nkwado ole na ole na ọdịnaya dị obere na-arịọ maka nzaghachi. Achọpụtara m na usoro a na – enyere ndị na – agụ akwụkwọ m na – eguzosi ike n’ihe aka ịghọta na ha bara uru ma na – enyere aka na ntanetị nke blọgụ m, ma ka na – enye ndị na – agụ akwụkwọ m ndị ọzọ ihe bara uru.
Ọdịnaya pụrụ iche ị ga – eji ihe edepụtara gị ga – adịrị gị na mkpa ha, mana n’ozuzu ị nwere ike ịhọrọ maka mmelite na ọdịnaya nke ị na – ebipụtaghị ma ọ bụ naụbọ ma mabụ ọ bụ beta ịchọrọ nzaghachi ha na Ha ghọtara gị karịa ndị na-amaghị gị nke ọma. Knowmara na ị chọrọ ka ha nwee ọdịnaya kachasị mma ị mepụtara maka ịde blọgụ gị.
Ahụmịhe m nwere na – agbapụ akwụkwọ akụkọ dị iche, nke nwere aka na – emetụ aka na ndị nwere ogologo oge na ndị na – akwado otu n’ime ọrụ akụkọ ifo, Robocity World – ndị a bụ ndile mwaharawu n’oge ogologo oge na – egbu mgbu ma ghara ịgbafu mgbe m ‘ghagharịrị’ akụkụ nke akụkọ ahụ. Akwụkwọ akụkọ m mepụtara bụ maka ha, ebe ha maara etu weebụsaịtị m na ọdịnaya ya siri gosipụta afọ iri tupu ngbanwe, na ọdịnaya e mere maka obere otu a na – ejikọ ọnụ na akụụkw agga eme. oburu na aghota ebe ha no na mgbe ahu.
Otu n’ime ihe ndị blote ụ ga-eji mepụta akwụkw n ozi ọma, nke dị iche n’etiti ndị dị iche iche nke ndị na-ege gị ntị dabere na mkpa ha pụrụ iche bụ ihe dị mkpa. N’ezie, nè a bụ ihe a na-emekarị n’ọtụtụ ọrụ nis, dị ka golf.
Ndepụta ndepụta dị mkpa iji kwalite ngwaahịa / ọrụ dị iche iche nuwe ndị debanyere aha ha. ENECON bụ ụlọ ọrụ na-emepụta die ndozi na ndozi nke na-edozi ọtụtụ nsogbu. Ebe ọ bụ na anyị na-azụ ahịa maka ụdị 30 dị iche iche na ndị ọrụ njedebe dị iche iche, ụlọ ọrụ ndị akọwapụtara na-ekewa ndepụta anyị iji mepụta ngwaahịa dị mkk narịị Enigeị agaghị ezigara ndị na-ahụ maka ịrụ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọ mmiri na-arụzi ụgbọ mmiri. Mgbe ọ bụla anyị bulite kọntaktị ọhụrụ na sistemụ e-pos enigeị, enigeị ga-ekewa ha ụzọ isii dị ich ich. Stuur ‘n e-pos aan anyị na-enweta na igbe mbata ozi anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na kọntaktị enweghị ngalaba ọrụ, anyị ga-edowe ya na listi izugbe. N’oge na-adịbeghị anya, anyị zipụrụ akwụkwọ akụkọ pụrụ iche na ndepụta e-pos anyị niile na-enye nri ehihie na inye onyinye ma ọ bụrụ na ha na onye nnọchi anya nọdụ maka ngosipụta ngwaị Anyị natara ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mmeghe site na e-pos ma Hazie ọtụtụ ngosipụta maka ndị ahịa anyị. Bemarking stuur ‘n e-pos na nkebi ndepụta deur ngwaọrụ dị ike maka ụlọ ọrụ nwere ike iwepụta azụmahịa ọhụrụ.
Mgbe ụfọdụ ndị na-ede blọgụ na niche gị ga-agbasa ozi na-ezighi ezi, mgbe ị na-eme ike gị niile iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ alias site na ọdịnaya blog gị, ị nwere ike ịhọr o iji nweta ihe ịga nke ọma na niche gị.
Dit is ‘n goeie weergawe van Michael Martinez en al wat jy moet doen SEO na die prys – ‘n dollar $ 32 / vir elke maand wat jy moet doen en wat jy moet doen? ịnweta ebe ọzọ. (WHSR se Jerry Low bụbu onye debanyere aha.)
N’adịghị ka ndị debanyere aha na ndị na-ege ntị mgbe niile sitere na ọwa mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ndị o yiri ka ha nwere ekele maka nkwupụta ọha, na ahụmịhe m na-agba ọsọ Robwokw World World ụfọdụ ndị egwu na-eguzosi ike n’ihe na ndị debanyere aha egosighi mmasị n’igosi na blọọgụ m ma ọ bụ na ọwa m.
Ihe nzuzo nke akwukwo akuko edeputara enyere aka ime nke a. N’ezie, ọ bụrụ na ekpughere ọ bụla ma ọlị, ọ blote webwerf na iji aha njirimara, ebe ezigbo aha ha na e-pos ma ọ bụ adreesị weebụ ha ka bụrụ nke nzuzo. Enwere m ndị kọntaktị na-arịọ ka a ghara igosipụta aha ha ma ọ bụ e-pos na nzuzo ha, ụfọdụ esonyeghị na nnọkọ nzuzo m guzobere iji mejupụta akwụkwọ akụkọ ahụ, ebe ha bu ndọọo Ndị ọzọ họọrọ isonye na otu akwụkwọ akụkọ naanị otu karịa na ndepụta izizi izizi maka nke a.
5. E-pos na-enye mmekọrịta enyi
N’ezie, maka ọtụtụ n’ime ndị m debanyere aha ha, e-pos dị mma karịa forums n’ihi nkwa ahụ na akwụkwọ ozi ga-ezo na nzuzo, ka onye na-edebanye aha nwekwara ike ịza nchegbu ha ndịjigh gụọ ya.
Nke a bụ eziokwu n’ozuzu maka ụdị ndị niile debanyere aha, mana ọ bụ ezie na ndị na-edebanye aha mgbe niile na-ekwukarị banyere iwepụta onye na-edeba aha m-naanị ọdịnaya, nanyọ naz mma ma tinye aka na nkwurịta okwu, karịsịa na omimi ya.
Nicole Bermack, redakteur van Edwardsturm.com, het ‘n goeie weergawe van die anataghị ikike n’ihi na-edebe mmekọrịta na gị ndepụta òtù dị ndụ:
Dit is ‘n kwuba-eenheid wat ‘n gbako-ime is, en die CTR-afslag is op 175% afkomstig, maar dit is ‘n dife. Mee ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ gị chọpụta aha onye ị na-ezigara ma jiri aha ahụ na mbido ozi ịntanetị ahụ. “Ndewo Nicole!” Bụ ezigbo enyi karịa “Ndewo, onye nwere ike ịdenye aha ndepụta m”. Nke a bụ ụzọ dị mma iji bulie CTR (pinye aka na ntanetị) ma mee ka ndị debanyere aha ha hụ na ha hụrụ ha n’anya.
Ọ bụrụ na i mepụtara ala nnabata na ịchọrọ ka ndị debanyere aha gị pụrụ iche na-arụsi ọrụ ike ma na-ekwurịta okwu, ịchọrọ ịchọta dịka o kwere omume na ozi-e, ma nye ghehe.
Ndị na-edebanye aha ndị Elite nwere ịnụ ọkụ n’obi maka ịbụ akụkụ nke obere ggwè nke pụrụ iche na isi ihe m na-elekwasị anya. Ọ bụ ezie na nkwurịta okwu na-abụkarị otu n’ime m – ọtụtụ ndị kwadoro usoro ahụ – ụfọdụ n’ime ndị a na-egosikwa na ha nwere mmasị ịmata ibe ha site na ụlọ ọrụ nzuzo. Hụ okpuru:
Akwukwo ozi mwere ngwongwo “nzipu ozi nzipu ozi +” ma mejuputara ya na nzuko nke onwe. Ejiri m GMANE maka ngwanrọ ndepụta ndepụta, nke bịara n’efu na ngwọta cPanel m. Ndị otu niile sonyere nwere mmetụta na ha sonyere na obodo, ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ndepụta karịa na nzukọ a, n’ezie.
Ha nwere ezigbo mmasị na ozi ịntanetị m n’ihi na nke a bụ ọdịnaya niile anaghị m akpọsa na anaghị eso ndị mmadụ. Na mgbakwunye na nke a, m na-ekwe ka ndị debanyere aha m ụlọ ọrụ nwee mmetụta ọdịnaya m ruo na nzaghachi ha, ha na-eme ihe mgbe niile dị ka ndị na-agụ beta (ọ bụrụ na ha dị njikere ime ya) , jy het net na-enwekarị agụụ ịbanye na ọdịnaya ọhụrụ. .
Ebe ọ bụ na ndị na-edebanye aha na ndị ọkacha mmasị nwere mmasị dị ukwuu na akụkọ nke akụkọ akụkọ m nọgidere na-aga n’ihu, ha na-achọsi ike ịhapụ nzaghachi dị mbu banya.
Ndị Aanhangers is ‘n webwerf wat na ‘nww enweta na ụbọchị, maar net die een of ander manier, karọsọa na àgwà nke nzaghachi ha. Mgbe ị nwetara nkwado dị otú a site n’aka ndị debanyere aha gị, àgwà ọdịnaya gị ga – ejidekwa – ị maara na ndị fan a kwere na gị, n’ihi ya, ị ga – aza nzaghachi ha dị ka nnukwu echiche na – agbanwe. Amaara m na ọ na-arụ ọrụ m.
Ọ bụrụ na ịmepụta listi ndị ọkachamara, jide n’aka na ị nwere ọwa ndị ọzọ maka ndị debanyere aha gị iji hapụ nzaghachi – ọwa naanị otu aka dị mma, dị ka otu nzuzo Facebook mawaụwawaụwaụ nchịkọta onwe dịka m mere na Robocity World Fans.
Ihe blote ichi akwukwo akwukwo akwukwo di iche iche abughi onye Elitist
Ọ bụrụ n ‘ịgbarụ nzukọ na blọọgụ zuru ezu, ị ga-ahụ ọtụtụ echiche megide ịkpa agwa. Enwere ndị kwenyere na ekwesighi inwe ndị ọrụ na-enweta ọdịnaya pụrụ iche karịa ndị ọzọ, n’agbanyeghị uru.
Ek was ụzọ abụọ ị ga-esi na-esite n’akụkụ dị iche iche:
Kwe ka ndị ọrụ banye maka òtù ha kachasị mma, n’ihi ya, ị nwere ụdị dị iche ich nke ndepụta gị dị njikere
CG Boyce Real Estate Co. is ‘n volwaardige maatskappy, maar dit is ook belangrik:
Mgbe ọ na-abịa n’ịmepụta ndenye n’ime listi, ka onye na-agụ ga-ekpebi ihe ndepụta a ga-agbakwunye. Enigiemand hoef nie MailChimp te hê nie, maar 700 mense wat nog nie meer beskikbaar is nie, kan nog net ‘n nichịkịta niche ndị ọzọ wees. Anyị gụnyere mgbakwunye nke ndepụta niche na isi ala anyị ma tinyezie otu akụkọ kwa izu site na ndepụta ahụ na "ịchọrọ ịgụ ihe dị ka nke a".
Ek, Nathan Williams en Crazy Eye Marketing, is ‘n voorbeeld van die volgende voorbeelde:
Ọ bụrụ na mmadụ pịa otu njikọ, anyị maara na ha dịkarịa ala nwere mmasị n’isiokwu ahụ, anyị nwere ike ịmalite ziga ọdịnaya ọzọ na otu isiokwu na / ma ọ bụ ịnwa ree nụwa.
Ọ bụrụ na mmadụ mepee e-pos, mana ọpaghị njikọ njikọ ahụ, ikekwe anyị esoghị onye ahụ rụọ ọrụ. N’okwu a, anyị nwere ike izipu e-pos ọzọ nwere otu njikọ ahụ, mana gbanwee ọdịnaya nke ozi-e ahụ, ma ọ bụ anyị nwere ike ịga na isiokwu ọzọ.
Ọ bụrụ na mmadụ emegheghị e-pos, enigeịnwere ike izipụ otu ozi-e ụbọchị na-esote usoro isiokwu ọzọ iji nwaa ma mee ka onye ahụ mepee e-pos ahụ.
Iji aka Mail Chimp gimp dee ndepụta:
Ị nwere ike ịhọrọ nke ‘n webwerf na ọnụ ọgụgụ nke ndị debanyere aha ma ọ bụ ndị ọzọ ubi. Pịa bọtịnụ "voorskou" mgbe ịmechara nhọrọ niile dabara n’ọnọdụ gị (dịka ọmụmaatụ dị n’okpuru ebe a, ndị niile debanyere aha wee banye na listi mgbe 1 Junie 2016).
Ndị ọrụ MailChimp Free Mail is net ike ịhọrọ alias 5 ụnọdụ ma jiri isi ihe mgbagwoju anya.
Mgbe ụfọdụ, dịka na ahụmịhe m, ị nwere ike ịchọ akụkụ yana njirisi na-etinyeghị na MailChimp – dịka ọmụmaatụ, ndị ọkpọkụ na akwadola nkwado websaịtị gị ma nweeụke nikeiche Addbọchị agbakwunyere ‘n’okpuru gegewens oor debanyere aha kama.
N’ọnọdụ ahụ, ịnwere ike ịmepụta otu kama ịmepụta otu, ma jiri aka tinye ndị debanyere aha n’okpuru otu ndị otu ọkachamara. N’ezie, uru nke Njikọ ahụ na MailChimp bhe ohere ịchekwa ego na njikwa ndepụta.
N’ezie, ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta, ọ ga-aba uru karị inwe otu nnukwu ndepụta ma jide n’aka na ọ na-ejikwa ya site na iji otu na ngalaba. Dit is bloot bụ na n’ụzọ dị otú a, ị na-akwụ ụgwọ otu ugboro na adreesị ozi-e. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ndepụta dị iche iche, ma ị nwere otu ndị ahụ [na] ma ndetu, ị na-akwụ ụgwọ ha ugboro abụọ.
Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ gị gbagoro agbakwunyere ga-enwe naanị kọntaktị ole na ole (ihe na-erughị 100), nwere ike ịhọrọ nhazi onwe gị nke agaghị etinye gị nsogbu na ISP gị.
Dịka ọmụmaatụ, ndị ọkachamara Robocity na-eguzosi ike n’ihe na-agụnye ihe na-erughị ndị 50, ebe ọ bụ na ezigaghị m otu ọ bụla ma ọ bụ abụọ ozi ịntanetị n’ọnwa, ọdịị na – esi na onye ọbịa m – n’eziokwu, M ji Thunderbird-naanị oge mbụ tupu ịkwaga GMANE, ọ dịghịkwa mgbe ọ bụla ọ na-akpata nzacha spam, ọ dịghịkwa nsogbu na onye na Ịnt.
Ejiri m otu kọntaktị na ngwọta nke m kwadoro (M na-eji ma GMANE na onye ahịa e-pos m) nuwe aha ya.
Edere m e-pos ahụ ma zigara ya otu (ọ bụrụ na-eji onye ahịa e-pos m, m ga-ahọrọ BBC ka ndị ọzọ zoro ezo ndị zoro ezo nuwe ndị nnata ahụ, ọ gwụla ma anyị wepụtara maka mbipzileuzipd Ole).
Ana m akwado gị ka ị jiri usoro a naanị ma ọ bụrụ na ndepụta gị dị obere, ụzọ dị ala karịa otu narị kọntaktị iji nọrọ na nchebe. Ma ọ bụghị ya, MailChimp bụ nhọrọ kachasị ọnụahịa ị nwere – ọbụnakwa nweere onwe ya new ndị debanyere aha 2.000 – ngwọta kachasị amasị m ugbu a.
Ndepụta njikwa na koesterende mmekọrịta bụ isi ihe na-agba ọsọ na-aga nke ọma, ma ọ bụ ọkwa. Atụmatụ ndụmọdụ abụọ a na – esonụ ga – enyere ndị na – agụ akwụkwọ gị aka na obi ụtọ.
Moenie ‘n webwerf na akwụkwọ akụkọ naanị hê nie; ị nwekwara ike iji nyiwe ndị ọzọ. Ndi akwukwo edere akwukwo bu ndi nkem Nkwalite DeviantART, ya mere, ikpo okwu bbe ebe kachasị mma maka m ịkọpụta ndị debanyere aha m, na mgbakwunye na ML / ala n’onwe ya na ebe ndị ọzọ.
Caitlin Bolnick VentureApp, na-enye abụọ dị oké ọnụ ahịa ndepụta bestuur Atụmatụ:
Otu n’ime akụkụ ndị kachasị njọ maka anyị na-ewu ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị na ndị na-ede akwụkwọ akụkọ webwerf na iji MailChimp. Enigiemand hoef nie in die kar te belê nie 10.000 nie, maar ook nie na die tyd nie, en dit is ‘n ego-ego. Lee is ‘n kapịrị ọnụ nke meworo ka enwewanye mmụba na oghere na ọnụ aka:
1. E-pos breek: e-pos na ndị ịrụ emepebeghị akwụkwọ akụkọ anyị na ọnwa 3 +, enige e-pos adres e-mail nkewa iji mee ka ha mara na a ga-edebanye aha ha n’akwụkwọ akụkọ anyị.
Nke a na-ebuli elu ma ọ bụ na-emekarị ka ndị na-edebanye aha na-emeghachi omume. Ọtụtụ ndị ọrụ ga-aza ma rịọ ka ịnọ na ala. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na enweghị mmeghachi omume ma ọ bụ akaebe na-agbaso e-pos, anyị wepu aha onye ọrụ ahụ. Nke a na-eme ka anyị nwee njikọ ọnụ na ọnụego na-emeghe ma na-enye anyị ower ilekwasị anya n’ịchọta ndị ọrụ na-emekọ ihe.
2. Ziga ozi ịntanetị ugboro abụọ Mgbe ụfọdụ: mgbe ụfọdụ anyị ga-ezitere anyị akwụkwọ akụkọ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ ala karịa itinye aka na nkịtị ma ọ bụ epenụego. Ek het ‘n pụtara bụ na anyị ga-ewepụta ndị ọrụ na-emegheghị e-pos anyị ma zighachi otu e-pos ahụ na isiokwu dị iche ma ọ bụ ọdịnaya dị iche iji hụ ma anyị nwere ike ịnweta njikọ du el. Oge ụfọdụ, usoro isiokwu adịghị mma nwere ike imetụta ọnụego itinye aka na yabụ ọ dịkwa usoro nnwale bara uru. Ekwesịrị iji nke a mee ihe n’ụzọ na-adịghị mma ka ị chọghị ịkpasu ndị debanyere aha gị ma ọ bụ nke ka njọ, na-emebi ntụkwasị obi ha.
Lettermepụta akwụkwọ akụkọ dị oke mma bụ ezigbo echiche ma ọ bụrụ na ị nwere otu ndị na – eme ihe nkiri, ndị ahịa, ndị na – akwado ma ọ bụ ndị ọrụ na-enweghị atụ zie nyeọọọọọọọọọọ Emepụta otu naanị ka ị nwee inwe ndị pụrụ iche nke ndị debanyere aha ma ọ bụrụ na e nweghị ihe zuru oke iji kọọ ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ na ịnweghị oge iji lekọta ndepụta aụd iwulite mmekọrịta bụ ntọala dị mkpa maka akwụkwọ akụkọ kachasị mma. , ma i nwere ihe ọzọ ị ga – enye ọfụma ịnye oke uru ọ ga – apụkwa iche site na akwụkwọ akụkọ mgbe ochie.